Wena inxaxheba Open Review of Kancinci Bit: Research loLuntu Digital Age. Ngexesha Open Review unokufunda le ncwadi kwaye kukwenza ngcono. Unako kunika iingcebiso make ezingachanekanga usebenzisa hypothes.is , inkqubo source ukuvula evulekileyo. Ngaphezu koko, le website kuya ukuqokelela ingxelo yakho ngokupheleleyo ngokuthi kubekwe njengabafundi yaye silahliwe izinga kwecandelo ngalinye lale ncwadi.
Open Review luya kuqhubeka xa umvakalisi le ncwadi, Princeton University Press, liqhuba uhlolo peer. Ingxelo evela Open Review and ngokutsha peer iya kusetyenziselwa ukwenza ngqangi ehlaziyiweyo. Ithuba Review Open iya kuphela xa ngqangi lokugqibela zingeniswa Princeton University Press, eya mhlawumbi kuba ngoNovemba 2016.
FAQ malunga ngokutsha evulekileyo
Loluphi uhlobo ingxelo olifunayo?
Review Open akukho nje malunga ubambisa typos. Kunoko, Review Open yenzelwe ukuqokelela zonke iintlobo ingxelo, kwaye ndingathanda ingakumbi ukwamkela nayiphi ingxelo ukuba malunga nento le ncwadi. Ingaba kukho amacandelo ukuba ukufumana ingakumbi Iyadidekisa? Izimvo zabo ukuba ukufumana kubaluleke ngokukhethekileyo? Ngaba ukwenza amabango ocinga ukuba kufuneka zihlaziywa? Ingaba kukho iindawo ncwadi ocinga ukuba kufuneka isuswe? Xa ukwintandabuzo, ndicinga ukuba kufuneka balandele enye yezi siseko engundoqo apho Wikipedia: Yiba ngqindilili .
Ngaba ndibubone ezingachanekanga abanye benza?
Ewe, zonke amanqakwana ezo zoluntu. Uyakwazi kubabona kwicala lesandla sasekunene wephepha ngalinye okanye wena ukwazi ukubona kubo kwifomu umlambo .
Ziziphi iingenelo abafundi?
Ufumana ukufunda ngqangi kwaye kukwenza ngcono.
Ziziphi iingenelo ngenxa ababhali kunye nabapapashi?
Inkqubo Review Open baya kuxhamla zombini ababhali kunye nabapapashi, nokuba abanamdla ekwandiseni ukufikelela kulwazi. Le nkqubo iya kukhokelela esemgangathweni ngqangi ephakamileyo ingxelo ecacileyo kunye lokukwekwa. Ngapha koko, inkqubo Review Open iza kubonelela data nesixabisekileyo kusetyenziswa ngexesha ukuba urhwebo le ncwadi.
Yintoni inkqubo yokwakha kule website?
Siza kwenza isithuba blog ngokupheleleyo ngayo kwixesha elizayo. Kuba ngoku, ukuba unako ukufunda okungakumbi ikhowudi yethu .
Ingaba kukho ubani owakhe wenze into enje ngaphambili?
Ndiqinisekile ukuba. Nazi ezinye iiprojekthi ofanayo ukuba Ndakhe ndeva malunga:
Hadley Wickham kubonakala ukuphuhlisa ezinye zeencwadi zakhe ngokupheleleyo kwi evulekileyo, nangona mna andizange ndambona bhala into malunga naloo nto.
Lawrence Lessig i- Code 2.0 yabhalwa kwinxalenye newiki.
Enye incwadi ephefumlelweyo ngokwenene ukuzama le ncwadi Michael Nielsen ngayo ukubefaka kweFidi . Ke, kubonakala ukuba ibeka incwadi yakhe entsha ekufundeni olunzulu ngokusebenzisa inkqubo efanayo.
Kathleen Fitzpatrick wenza into efanayo kwincwadi yakhe Olucetyiweyo iphelelwe: Publishing, iTeknoloji, yaye Ikamva Academy .
Ukuba kukho ezinye iiprojekthi ezinxulumene ukuba Ndikhe oziphosileyo, nceda usazise kwaye siza ongeze ikhonkco. Idilesi yethu email na info@bitbybitbook.com .
Loluphi ulwazi wena ukuqokelela kwaye iza kusetyenziswa njani loo nkcazelo?
Nceda funda wethu umgaqo-nkqubo ngemvume .
Njani Sinokufunda okungakumbi peer review yemveli iincwadi zemfundo?
The AAUP ezipapashwe kutshanje ingxelo ezona sokuhlolwa peer .
Ndingenza ntoni oku encwadini yam?
Ngokuqinisekileyo. Khangela le icandelo ikhowudi le website ukuze ngakumbi indlela nto.
Ndinombuzo ezahlukeneyo Open Review. njani mna, ndiye kunxibelelana?
Thumela i email info@bitbybitbook.com .